An-kitsim-po: ny aina, tsy ananam-piry | NewsMada
Mitaky finiavana sy fahavononana, indrindra hanaja ny fenitra fifanarahana. Izay ny fepetra fototra takin’ny orinasa Ambatovy amin’ireo PME mpiara-miombona antoka aminy. Rehefa lalàna dia lalàna, na heverina ho faran’izay tsotra aza. “Fitandroana ny aina ny zava-dehibe ka ny toy ny ianao miditra ato amin’ny faritry ny orinasa ny hivoahana ato”, hoy ny filohan’ny Ambatovy, i Stuart Macnaughton.
Raha jerena ny fiarovana ny mpiasa amina orinasa maro eto amin’ny Nosy, ampahany faran’izay vitsy ny mametraka fepetra tsy maintsy hanarahan’ny mpiasa izany. Hita izany amina sehatra maro, ohatra, amin’ny indostria sy ny fitaterana. Na ny mpampiasa na ny mpiasa, samy tsy manaja ny lafiny fiarovana izay. Hita koa izany amin’ny ataon’ireo orinasa mpandraoka fako: tsy misy fiarovana ireo mpiasa fa miaina tanteraka ao anatin’ny loto. Hararaotin’ny mpampiasa ny toeran’ireny mpiasa ireny ka izay tsy mahazaka loto, mahazo miala. Mibaribary koa izany amin’ny fanamboaran-trano: firifiry ny mpandraharaha tompon’ny tsena tsy manome fiarovana ny mpiasany?
Anjaran’ny fanjakana mpanara-maso ny asa ny mijery ireny rehetra ireny hisorohana ny loza satria tsy ananam-piry ny aina. Matoa koa anefa mahazo laka ny tsy fanarahan-dalàna toy ireny, mbola manjaka ny kolikoly ka odian-tsy hita ny loza mitatao.